Qaybo bir ah oo xaashi ah oo foorarsada warshad iyo alaableyda | Ouzhan
Qaababka foorarsiga ayaa loo qaybiyaa qaabab caadi ah iyo wasakh qaas ah oo qalooca iyadoo la raacayo habka foorarsiga. Xaaladaha foorarsiga caadiga ah (xagal qumman iyo laab la aan toosan), caaryado caadi ah ayaa guud ahaan loo adeegsadaa foorarsiga, iyo wasakhda qaaska ah ayaa loo isticmaalaa in lagu laalo qaybo qaabdhismeed gaar ah (sida foorarsiga tallaabada, geeska dhinta, iwm.).
Qaybaha foorarsiga birta xaashida --- geedi socodka foorarsiga xaashida biraha saxda ah
Faa'iidooyinka Ouzhan qaybaha foorarsiga birta
- Xawaare sare, saxnaan sare iyo la qabsi sare
- Wejiga dhamaadka goynta waa mid tayo fiican leh, oo aan buuq ku jirin goynta, iyo kooxda aagga alxanka iyo waxqabadka waxay ku dhow yihiin agabka aasaasiga ah
- In la gaabiyo muddada dhismaha lana yareeyo kharashka
Ouzhan OEM kartoo sheet bir laabaya qaybo processing adeegga-Shiinaha Shanghai biraha laabaya soo saaraha qaybo processing
Ouzhan waa soo saare isku xiraya warshadaha iyo ganacsiga, oo bixiya hal-joojin adeegyo mashiinka lagu rogo oo loo habeeyo. Marka loo eego shuruudaha macaamiisha, saxanka xaashida sare ee birta ah ee foorarsiga leh oo leh tayo deggan oo la isku halleyn karo ayaa laga shaqeyn karaa. Qeybahan mashiinka waxaa lagu soo saaray iyadoo la adeegsanayo alaabada ceeriin ee ugu tayada wanaagsan, kuwaas oo laga helo qeybiyeyaasha qeybaha saxda ah ee caanka ku ah suuqa. Kooxdayada farsamada adag iyo xirfadeed iyo maaraynta hufan iyo nidaamka howlgalka waxay xaqiijin karaan soosaarka saxda ah ee qalabka mashiinka foorarsiga birta. Intaa waxaa dheer, alaabada foorarinta xaashida biraha ah ee la bixiyo waxay si adag u hoggaansamaan heerarka tayada waxaana loo isticmaali karaa codsiyada kala duwan ee warshadaha. Oo waxaan ku siin karnaa adeegyo qiimo tartan loogu talagalay xaashida biraha foorarsiga iyo foorarsiga alaabada macaamiisheena qaaliga ah.
Meelaha arjiga ee foorarsiga birta ah
Qaybaha wax soo saarka birta xaashida ayaa had iyo jeer ku xeeran nolosheena, sida qiiqyada, durbaanada birta, haamaha shidaalka, durbaanka saliida, dhuumaha hawo bixinta, xusullada, iwm., Sida kuwa yar yar sida koobabka darmuusyada birta, malqacadaha maraqyada, sanduuqyada qadada ee birta ka sameysan. kiisaska taleefanka, iwm, waxyaalahan lagama maarmaanka u ah nolosheena waxay isticmaalaan bir xaashi ah, oo lagu farsameeyo qaybo bir ah oo qeexitaanno kala duwan ah oo aan u baahanahay. Waxay isbedello badan ku keentay wax soo saarkeenna iyo noloshayada.
Faa'iidooyinka adeegga Ouzhan ee foorarsiga birta
- Dhamaan foorashada xaashida saxda ah waxay kuxirantahay kormeer tayo oo adag.
- Marka loo eego sawirro ama shaybaarro loogu talagalay soosaarka saxda ah ee foorarsiga birta.
Hore: OEM ahama qaybo farsamo been abuurtay
Xiga: Qalabka birta ah ee foorarsiga birta ah
Qaybo carbon axdi qarameedka processin ...